विदेशी विनिमय बजार मा व्यापार - एक जोखिमपूर्ण व्यवसाय। ट्रेडों व्यापारीहरु प्राविधिक विश्लेषण उपकरण प्रयोग गुमाउने को संभावना कम गर्न। उपकरणहरुलाई को एक "सार्दा औसत" सूचक हो।
राय चार्ट मा कुनै पनि अतिरिक्त निर्माण विरोधाभासी छन् प्रयोग गर्न आवश्यकता बारे खेलाडीहरू अनुभव। केही धेरै रेखा, धर्काहरू र मूल्य चार्ट मा हिस्टोग्राम खेलाडी को मन मा भ्रम सिर्जना भन्ने विश्वास गर्छन्। यी गुरुहरू तर्फ सबै "turkeys" राख्न र मूल्य सूची संग मात्र काम सल्लाह छन्।
अन्य गुरुहरू पनि बाँदर र चश्मा को छोटो कथा बारेमा सम्झाउने र राम्ररी यसको सकारात्मक पक्ष बुझ्न र व्यावहारिक आवेदन गर्न सिद्धान्त परीक्षण गर्न कम्तिमा एक सरल प्राविधिक उपकरण बुझ्न सल्लाह।
लेनदेन गर्न यी सरल र उपयोगी संकेत आपूर्तिकर्ता को एक सूचक "औसत सार्दा" छ।
को औपचारिक परिभाषा
औसत चलायमान - समय को एक स्थिर अवधिको लागि सम्पत्तिको विनिमय औसत मूल्य छ।
यो मापदण्ड औसत सार्दा आधारित अन्य सूचकहरू को गठन मा एक आधार रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
मोमबत्ती या बारहरू: समय अन्तराल मा तथ्याङ्कले प्लोटिङ मापन गरिएको छ। "15 को एक अवधि औसत सार्दा" वाक्यांश को मतलब मान को ग्राफ लाइन हरेक 15 लगातार बारहरू वा मोमबत्ती लागि निर्मित गरिनेछ हो।
गठन पहिलो 15 तत्व मान। हामी आफ्नो औसत मूल्य को आधार मा गणना। को सोह्रौं मैनबत्ती पहिलो आंकडा गिरा को गठन,2देखि 16 खाता मोमबत्ती मा लिएको हो।
को सत्रौँ मोमबत्ती को गठन मा कार्यहरू बारम्बार छन्। र त गणना तालिका सम्पूर्ण एरे लागि गरिन्छ।
टर्मिनल मा व्यापार गर्दा स्वयं संकेत लाइनहरु निर्माण छैन। स्वचालित रूपमा व्यापार कार्यक्रम MT4 र MT5 मा रेखा चित्रकला। तसर्थ, यस लेखमा गणितीय गणना हुने छैन। रुचि दल गर्दा लेनदेन बीच निःशुल्क समय हुनेछ, मद्दत खण्डमा पृष्ठभूमिमा जानकारी पढ्न मौका छ।
कार्यक्रम मा, तपाईं एक मुद्रा जोडी को औसत मूल्य गणना गर्न कुनै पनि अन्तराल चयन गर्न सक्नुहुन्छ।550 को अवधि अल्पकालीन भनिन्छ। किन्न वा मुद्रा 120 को अवधि विश्लेषण र सबैभन्दा प्रकट रूपमा माथि हुनुपर्छ बेच्न लगानीको निर्णय गर्ने।
संकेत लाइनहरु को प्रकार
छोटो अवधि 20 को नीलो लाइन सम्पत्ति सार्ने औसत संग मैनबत्ती चार्ट देखाइएको उदाहरणका लागि।
मैनबत्ती मूल्य झल्काउँछ चार मापदण्डहरू:
खोल्ने समयमा मूल्य;
घनिष्ठ मा मूल्य;
गठन को अवधि को लागि न्यूनतम मूल्य;
तदनुसार, यो मध्यम आकारको खोल्ने र बन्द मूल्यहरु, न्यूनतम वा अधिकतम मान को निर्माण को लागि अनुरोध गर्न सम्भव छ। तपाईं पनि प्रत्येक मैनबत्ती को सार्दा औसत मूल्य को गणना सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ।
सेटिङहरू व्यापार कार्यक्रम खातामा ग्राहकहरु सौंदर्य प्राथमिकताहरू लिन र फारम मोटाई र रेखा रंग को एक विकल्प प्रदान साथै -, ठोस डट वा ड्यास।
एक गणितीय विधि निर्माण गरेर प्राविधिक सूचक सार्दा औसत चार प्रकार वर्गीकृत छ। पारंपरिक प्राविधिक विश्लेषण अवधि औसत चलायमान देखि - brevity लागि, हामी संक्षिप्त एमए लाइन जनाउँछ।
एमए linearly भारित।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कम से कम महत्वपूर्ण मैनबत्ती: वर्गीकरण गर्ने गणना गर्न जिम्मेवारी मोमबत्ती रैंक मा हुन्छ।
विशेषताहरु सामान्यतः सार्दै औसत प्रयोग
हामीलाई सूचक को चार प्रकार विचार गरौं। दुई सार्दा औसत लगातार र प्रभावकारी लागू छन्। अन्य दुई दुर्लभ अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ।
присваивает первой и последней свече в периоде одинаковую значимость. सरल एमए पहिलो र वैधता को नै अवधि अन्तिम मैनबत्ती प्रदान। त्यो छ, 15 पहिलो मैनबत्ती को दायरा मा पन्ध्रौँ सबै भन्दा ठूलो छ। यस कारण, एक सरल एमए औसत सूचक सार्दा ढिलो र अधिक छोटो दूरीमा मा प्रतिक्रिया ठूलो ढिलाइ संग रूपबाट। लामो अवधि मा एक सरल ऐ राम्ररी गऱ्यौ देखाउँछ।
плавно присуждает значимость свечам в обратном порядке: последняя – самая значимая, первая – аутсайдер расчетов. Exponential एमए सजिलै उल्टो क्रममा महत्त्व मोमबत्ती confers: अन्तिम - सबैभन्दा महत्वपूर्ण, पहिलो - गुटदेखि बाहिरको व्यक्ति गणना। त्यसैले लाइन अवधि को सुरुमा र अन्तमा amplifies मा मूल्य उतार चढाव गर्न यसको आफ्नै संवेदनशीलता कम गर्छ। तसर्थ, लाइन ग्राफिक्स छिटो सरल एमए को एक एरे जवाफ।
यो आंकडा विनिमय सम्पत्ति एक ग्राफ देखाउँछ। लामो अवधि मा रातो, छोटो अवधिको लागि नीलो: ग्राफ मा घाताङ्कीय सार्ने औसत बनाए। चौबाटोको को बिन्दुमा क्रसओभर बिक्री बेचन र क्रसओभर किन्नुहोस खरिद गर्न संकेत गठन।
संकेत लाइनहरु को दुर्लभ प्रजाति
по принципу отбора похожа на экспоненциальную, но есть нюансы. linearly चयन आधारमा भारित एमए घाताङ्कीय समान छ, तर त्यहाँ nuances छन्।
महत्त्व प्रतिपादक स्पार्क घट्छ सजिलै: N, N-1, N-2 ... N-14, 0, उदाहरणका लागि, अवधि 15।
linearly प्रत्येक मैनबत्ती भारित MA उल्टो क्रममा वजन पनि, तर थप जोडले अझै यसो भन्छन्: 8n, 4n, 2n, N, N / 2, ..., र यति मा मैनबत्ती एरे को अन्त सम्म। यो लाइन अत्यधिक सम्पत्ति विनिमय को मूल्य मा परिवर्तन निर्भर छ।
अन्तराल गणना लागि एमए रोचक आकारहरू मिलेका। उदाहरणका लागि, नियुक्ति को हालको अवधि मा मात्र होइन मोमबत्ती लिएको, 15 मोमबत्ती। अघिल्लो अन्तरालहरू खातामा लिएको। तर आफ्नो महत्त्व लागि वर्तमान समय स्लट देखि दूरी रूपमा घट्छ। यो मिलेका संकेत दीर्घकालीन रुझान निर्धारण गर्न मात्र लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ। तर किनभने गणनाको लाइन को ठूलो रकम को निश्चित छ, र यो शायद मुख्य रूप प्राविधिक विश्लेषण को विधिहरू अध्ययन को लागि प्रयोग गरिन्छ।
सूचक सबै चार प्रकारका समग्र विकासका लागि प्रस्तुत "औसत सार्दा"। व्यवहार मा, अल्पकालीन रुझान पहिचान गर्न खेलाडी को घाताङ्कीय एमए प्रयोग; सरल एमए लामो अवधि भविष्यवाणी लागि उपयुक्त छ।
15 नम्बर उदाहरणका लागि छोटो अवधि चयन गरिएको छ। व्यवहार मा, अन्य अन्तरालहरू, छोटो वा लामो, उदाहरणको लागि, 8 वा स्पार्क प्लग को 21 प्रयोग गर्नुहोस्।
365 दिन वा महिना - - 180 लामो अन्तरालहरू एमए वर्ष निर्माण को लागि चयन मा।
व्यापार गर्न ऐ संलग्न
चार्ट थप लाइनको विश्लेषणात्मक निर्माण को उद्देश्य - तोडने रुझान को बिन्दु को परिभाषा। "सार्दै औसत" को विदेशी मुद्रा बजार मा सूचक - सबैभन्दा बुझ्न उपकरण।
हामी छोटो अवधिको लागि "छिटो" लाइनको अवधारणा परिचय र "धीमा" - लामो अवधि मा लाइनहरु को लागि।
प्रवृत्ति Scrapping छिटो र ढिलो एमए को चौराहे मा हुन्छ। यो आंकडा छिटो 50 दिन को अवधि र 20 दिन को एक ढिलो अवधि, दुई मध्यम linny को सम्पत्ति तालिका पार देखाउँछ।
एक चलिरहेका बजार मा नियमहरू काम:
द्रुत ढिलो शीर्ष-तल क्रस - बेच्न पर्छ, मूल्य पतन हुनेछ।
छिटो ढिलो अप तल बाट पार - तपाईँले किन्न छ, मूल्य वृद्धि हुनेछ।
अत्यधिक अस्थिर बजार मा हल्ला आन्दोलनहरु धेरै सिर्जना, त्यसैले नियम गोठ सक्छ।
यो लाइन एक ठंड संकेत दिनको सम्झना गर्नुपर्छ। तसर्थ, सूचक सार्दा औसत को चौराहे किन्न सम्झौता को प्रवेश को लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। कारण झुकाव को लेट आगमन गर्न संकेत बल गुमाउन। प्लेयर किन्न, र मूल्य एक सानो द्वारा उठ्नेछ, र भनेर बजार सहभागीहरू, तल जानुहोस् र बोझ भन्दा समय र हातमा प्रतिक्रिया समय छैन। घाटा जम्मा गर्न क्रममा, इन्टरसेक्ट मात्र बिक्री को लागि प्रयोग गर्नुपर्छ।
ऐ झुकाव को कोण
प्रवृत्ति को बल बारेमा निर्णय गर्ने, तपाईं लाइन को कोण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अवधि अब लामो अवधिको लागि प्रयोग कोण, 21 को माथि, को को कोण steeper, अधिक उच्चारण प्रवृत्ति को बल।
को विदेशी मुद्रा बजार मा मुद्रा जोडी को मूल्य बढ्दै छ छैन मात्र वा झर्ने, तर नजिकै गति छ। को झुकाव सूचक सार्दा औसत मूल्यांकन पार्श्व आन्दोलन गर्न झुकाव पहिचान गर्न मद्दत गर्छ।
औसत सार्दा कोण नेतृत्व रणनीति समायोजन MA को चौराहे मा व्यापार गर्दा। स्रोत रूपमा कार्य गर्न प्रयोग गरिएको छैन भइरहेको, तर चित्र रूपमा स्क्रिनमा स्थिति को धारणा सुधार गर्छ।
आवेदन कोण प्रयोग
सूचक ग्राफ तल स्थित एक केन्द्र लाइन संग एक रंग हिस्टोग्राम को फारम छ। मानक हिस्टोग्राम को रंग योजना:
हरियो रंग - विकास।
रातो - कमी।
पहेलो - नजिकै सार्न, फ्लैट।
डलर - उदाहरणका लागि, यूरो को ग्राफ विचार गर्नुहोस्। को सार्दा औसत सुनको रंग चित्रित छ। साथै सारेर चित्रित र तीर कोण द्वारा हस्ताक्षर gistonramme गर्न:
हरियो बढ्दो - वृद्धि संकेत;
पहेंलो समतल - सुरुदेखि;
रातो झर्ने - ड्रप।
यो गहन विनिमय सम्पत्ति वृद्धि दर, चार्ट को स्तम्भ उच्च र conversely, वृद्धि दर घट्दै स्तम्भ उचाइ कम छ।
प्लेयर भेला गर्न आसन धारण पकड गर्न सक्छन् - यो प्रवृत्ति उच्च मूल्य को वृद्धि को दर, को steeper लाइन एमए को कोण, मजबूत।
को को एमए, को कमजोर प्रवृत्ति को झुकाव को कोण कम मूल्य को परिवर्तन को दर, सानो।
आउँदै शून्य एक कोण संग, तपाईं "पागल को rustle लागि।" मात्र व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ
35 ° 15 ° देखि दायरामा समायोजित को कोण मा एउटा कारोबार प्रतिबद्ध एउटा संकेत अनुमान लागि व्यावसायिक प्रणाली। को झुकाव कोण सूचक सार्दा औसत सेट अलग प्रत्येक सम्पत्ति विनिमय लागि गर्न सकिन्छ।
मुद्रा जोडी पाउंड को मूल्य को दैनिक चार्ट विचार - डलर तीन स्लाइड हङ: छोटो 10 र 20, सबैभन्दा लामो 200. यो बलियो प्रवृत्ति मूल्य तिनीहरूलाई द्वारा repelled लाइन, मार्फत तोड्न सक्दैन, र मूल्य कदम को झुकाव संरक्षित छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अर्थात् समर्थन र प्रतिरोध रेखा रूपमा कार्य सार्दा। र गतिशील लाइनहरु, तिनीहरूले सम्पत्ति मूल्य भन्दा सार्न रूपमा।
सार्दै राख्दै स्टप-घाटा लागि स्तर रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। लाइनहरु बाहिर खुट्टा सेट गर्नुहोस्। जब खुट्टा पुनर्व्यवस्थित हालको मूल्य देखि आउँदै।
फेरि: खरिद न त kratkosroke लागि वा दीर्घकालीन सम्झौता मा छिटो र ढिलो लाइनको इन्टरसेक्ट को बिन्दु प्रयोग नगर्नुहोस्। पार देखेको - बाहिर, यो सूचक भन्छन्। दुई सार्दा औसत काट्ने - प्रवृत्ति परिवर्तन हो।
तेज र ढिलो क्रस खेलाडी सम्झौता बन्द, तर यो समय मूल्य बीचमा क्रस छ भने, हामी मूल्य प्रतिरोध वा समर्थन स्तर तल स्तर माथि हुनेछ कहिलेसम्म हेर्न छन्।
झूटा नमूना एकल मैनबत्ती गठन। मूल्य माथि वा मतलब तल तीन वा चार मोमबत्ती चित्रकला भने, यो एक प्रवृत्ति परिवर्तन को एक उच्च सम्भावना हो। किन परिवर्तन मा एक सय प्रतिशत विश्वस्त? यो आवश्यक छ किनभने अवधि औसत मा हेर्न। अवधि थप संभावना एक टूटने मा प्रवृत्ति को परिवर्तन, लामो छ। औसत मूल्य बढ छोटो अवधि मा धेरै सानो छ।
विश्व शेयर आदानप्रदान विभिन्न समयमा खोल्न। त्यहाँ संयोग घण्टा अवधि तपाईं पाइ को विनिमय देखि लाभ को एक टुक्रा बन्द NIP सक्छ जब छन्।
समाचार हेर्ने पनि फरक। प्रत्येक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू प्रवाह एक निश्चित समयमा हावा मा जारी छ।
मूल्य व्यापारिक सत्र समयमा धेरै घन्टा को लागि सही दिशा व्यापारी मा सार्न सक्छ।
यी तीन कारण खेलाडी निगरानी लीन र प्रतीक्षा समय गुमाउन बनाउन।
टर्मिनल को ध्वनि सूचना समारोह - स्थिति चेतावनी मदत गर्नेछ उपाय।
रिमाइन्डर कसरी सेट
दुई तरिकामा टर्मिनलमा मा सूचनादाता सेट:
1 को कारोबार मुद्रा जोडी संग स्क्रिनमा मेनु "व्यापार" चयन गर्न, र यो विकल्प "चेतावनी" र लाइन मूल्य कर्सर संक्षेप। सूचनादाता तुरुन्तै स्थापित छ।
2. स्क्रिनको तल "सतर्कता" चयन मा, "सेटिङ" चयन गर्नुहोस् र संवाद बक्स भर्न। कार्यक्रम3अलार्म अवस्था सूचनादाता को एक विकल्प प्रदान गर्दछ:
मूल्य खरिद को स्तर बोली सम्म गए;
मूल्य स्तर बिक्री सोध्न गए;
जब अलार्म बन्द जान्छ निम्न कन्फिगर गर्न सम्भव छ:
ध्वनि फिड सिङ;
सक्रियता फाइल फाइल;
यस हुलाक कार्यालय मेल पत्र पठाउने;
मोबाइल टर्मिनल सूचनाहरू पत्राचार पठाउने।
प्रवेश वा बाहिर निस्कन को बिन्दु योजना बनाउँदा चेतावनी उपयोगी छ। सतर्कता संग औसत बढन सूचक लागि कार्यक्रम को एक किसिम। माथि वा मध्य लाइन को चौराहे तल तीर को रूप मा ग्राफिक प्रदर्शन गर्न साथै, प्रयोगकर्ता अडियो संकेत प्राप्त गर्दछ।
जब चेतावनी संग व्यापार विदेशी मुद्रा सूचक छोटो अवधिको लागि प्रयोग गरिन्छ र किनभने laterally झूटा सकारात्मक र आधा एक घण्टा संकेत को लामो अवधि धेरै सार्दा ढिलाइ संग आएको एक, उच्चारण प्रवृत्ति।
निष्कर्षमा मा: प्राविधिक विश्लेषण कुनै पनि सिद्धान्त, पनि सबैभन्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया वास्तविक खातामा काम सुरु गर्नु अघि, डेमो खाता जाँच गर्नुहोस्। होने एक पाठ सिके र एक नियन्त्रण सञ्चालन प्रदर्शन, प्रयोगकर्ता सरल र उपयोगी सार्दा औसत प्रयोग संग विदेशी मुद्रा बजार मा संवर्धन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वाप - यो विदेशी मुद्रा मा एक विशेष अपरेसन छ
Samsung एमएल-1660: अति-संकुचित र उच्च गतिको मुद्रक
वेशभूषा, आफ्नो प्रकार, जहाँ उहाँले: बारेमा ब्लेड र सोल सबै भन्दा राम्रो कुरा
4 दिनको लागि प्रभावकारी आहार
स्टार्लिंग बचेराहरूलाई कसरी ल्याउन?
के बिरालोहरु सपना: रोचक अनुसन्धान